ဘလော့မော်ကွန်း -3စာမျက်နှာ4- mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
နိုဝင်ဘာလ 11, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
စက်တင်ဘာလ 23, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ဒါဟာ Lucknow, အိန္ဒိယအတွက် 14 နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမသွန်သင်စေခြင်းငှါဒါပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ Promila ဗဟာဒူး 1991 ၌ဤစကားပြည့်စုံသောအခါမူကားအဘယျသူမဤအသိပညာနှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်အလှနျပဲ 15 ကီလိုမီတာသူမ၏နေအိမ်ထဲကနေဆင်းရဲသားကျေးလက်ရွာ၌များစွာသောအမျိုးသမီးငယ်များ၏ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
Promila Chinhat Block ကို, Uttar Pradesh ပြည်နယ် Lucknow ခရိုင်အတွင်းတည်ရှိသည် Nizam ထိုနေ့ကိုပု၏အနီးအနားရွာသွားရောက်လည်ပတ်မယ်လို့တဲ့အခါသူကအမြဲရွာနေထိုင်သူများနှင့်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ပညာရေးရဖို့ရန်မအခွင့်အလမ်းများကိုခဲ့မသက်မသာခံစားရတယ်။ ဒီရွာနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးကတူထောင်ပေါင်းများစွာများတွင်အမျိုးသမီးငယ်ချက်ပြုတ်ပြီးအိမ်ပြန်ဂရုစိုက်, လက်ထပ်ရန်, ပြီးတော့တစ်မိသားစုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့သင်ယူဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့စာမတတ်၏ဤဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသံသရာကျေးလက်နေအိန္ဒိယအတွက်အကြီးအကျယ်ညျ့စုံသောလူဦးရေ perpetuated သိရသည်။
ဒီတော့နှင့်သူမ၏မိဘမြား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူထင်စေခြင်းငှါ, အခွားအဘယျလူများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲ, သူမကကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အတူရွာသွားရောက်လည်ပတ်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အမျိုးသမီးငယ်မှကွန်ပျူတာစာတတ်မြောက်ရေးဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ခဲ့သည်။ သူမ၏သူတို့သားသမီးကူညီအတည်ပြုသူမ၏ကျောင်းသားများ၏မိဘများ။ Promila တစ်ဦးစာတတ်မြောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိခင်ဖြစ်လာမှမိန်းကလေးငယ်များအားပေးအားဖြင့်အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးဖို့ Self-လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံကိုသုံးပြီး, သူမက, Guru ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပညာရေးစင်တာ (2004) စတင်နောက်ပိုင်းတွင်အမည်ပြောင်း သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ Guru Institute က, ပိုပြီးကွန်ပျူတာများကိုဝယ်တစ်လလျှင် $ 70 များအတွက်ရုံးခန်းငှားများနှင့်နောက်ဆုံးမှာဒေသခံဝန်ထမ်းငှါး၏။ ကနဦးလူတန်းစားခုနစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များပါဝင်သည်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူမတစ်ကြိမ်ထက်ပို 60 ကျောင်းသားများကိုအပေါ်ယူပြီး, ယောက်ျားလေးများနှင့်အချို့သောအဟောင်းများအမြိုးသမီးမြားပါဝငျသညျ။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏ Guru Institute ကမှာအိန္ဒိယအလံ Hoisting ။
ယနေ့အထိ, Promila လူငယ်, အမျိုးသမီးများ, သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးများအပါအဝင် 2000 ကျော်တစ်ဦးချင်းစီ, လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်!
Promila for "ဟု The လှုံ့ဆျောမှုသညျဘုရားသခငျအမျိုးသမီးတွေအပေါ်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏တန်ခိုးကိုပေးသနားတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေလာပါတယ်။ ငါ၏အအထက်တန်းကျောင်းဆရာ, ဆရာမများ၏တဦးတည်း '' တစ်ဦးကစာတတ်မြောက်မိခင်တစ်ဦးစာတတ်မြောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းပေးနိုင်ပါသည်။ 'ကြောင်းပြောတယ် ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်! "
2004 ခုနှစ်, Uttar Pradesh ပြည်နယ်၏အစိုးရအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအဖြစ် Promila အတည်ပြု ကျေးရွာအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (VLE) တစ်ဦးကိုစတင်ရန် ဘုံဝန်ဆောင်မှုစင်တာ (CSC) ကျေးလက်နေအိန္ဒိယလူမျိုး၏နေ့-to-နေ့ကလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ အိမ်နီးချင်းကျေးရွာများတွင်လူတွေတောင်မှအမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများအတွက်သူမ၏ CSC ပေါ် မူတည်. စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကွန်ပျူတာစာတတ်မြောက်ကြဘူး, ဒါကြောင့်သူမရဲ့ရှေးခယျြရွာနှင့်အိမ်နီးချင်းရွာလူကွန်ပျူတာပညာရေးပေးခြင်းစတင်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရတို့ကတည်ခင်းဧည် CSCs တစ်အမျိုးသားညီလာခံမှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်, Promila အထူးအလံကိုလက်ခံရန်သာခြောက်လအိန္ဒိယအားလုံးအတွက် 500 VLEs ထဲကတဦးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ!
ဂုဏ်အသရေအိုင်တီဝန်ကြီး Shri Ravi Shankar ji Promila ရဲ့အဖြစ်များသည့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှတဆင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှလုပ်သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
သူမကအထက်တန်းကျောင်းနေစဉ် "Uzma 11 နှစ်ပေါင်းကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်စတီကျုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦးရှေးရိုးစွဲမွတ်စလင်မိသားစုထံမှဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မိသားစုအဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုလိုက်မှသူတို့သမီးခွင့်မပေးပါဘူး။ သူမ၏ဖခင်လယ်သမားတစ်ဦး, ငါ့ကိုချဉ်းကပ်, သူ၏သမီး၏အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်အကြံပြုချက်များအဘို့ဟုမေး၏။ ငါ၏အအကြံပြုချက်တွင်, Uzma ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်သူမ၏ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ပြီးဆုံးနောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သခင်ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်လတ်တလောတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်စတီကျုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းများဆုံးမဩဝါဒပေး၏။ "
Promila ထံမှ Uzma Irfaan ရဲ့ကျောင်းသားလက်ခံရရှိဆု။ Uzma နောက်ကျောများတွင်နည်းပြဖြစ်ပါတယ်။
Manoj Kumar က Yadav
"Manoj 2014 စတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအသုတ်အနေဖြင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးဘွဲ့ကြိုခဲ့ပါတယ်။ သူကသူ့ကိုဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုကိုကူညီရှာဖွေနိုင်သည့်အချို့သောကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသင်တန်းများရှာဖွေနေခဲ့သည်။ Manoj ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်စတီကျုကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းများကိုသုံးနှစ်ကိုပြု၏။ သူလည်းတစ်ဦးမာစတာရဲ့ Computer ကိုလျှောက်လွှာထဲမှာကိုပြု၏။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်လည်းနည်းပြအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ လောလောဆယ် Manoj ဘွဲ့ကြိုနည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများများအတွက်နည်းပြအဖြစ်တက္ကသိုလ်အတူလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ "
Sunil Kumar က
"Sunil အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ သူ 2014 အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပူးပေါင်းသောအခါသူတစ်ဦးတက္ကသိုလ်တစ်ခုရုံးကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးဘွဲ့ကြို, အနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်စတီကျုမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရေးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါပြီးသွားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်စတီကျု, Sunil ထံမှသင်တန်းများအတူတူတက္ကသိုလ်အတွက်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အော်ပရေတာအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ကွောငျးတှေ့ဖို့ကယ့်ကိုအံ့သြသွားတယ်။ ဤသည်အဆင့် III ကိုမှအဆင့် IV မှတက်ရွေ့လျားဆိုလိုသညျ။ "
Promila ရဲ့ဘဝသူမ၏အင်စတီကျုစတင်ကတည်းကနည်းလမ်းများစွာအတွက်ပြောင်းလဲသွားပြီ: သူမကကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်သူမ၏ MCA နှင့် MTech ဒီဂရီပြီးစီးခဲ့ပြီ, လက်ထပ်ဆည်းပူးနှင့်သူမ၏ Ph.D ဘွဲ့ကိုရယူထားပြီး ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်အိန္ဒိယအတွက် Uttrakhand နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေ။ သူမ၏ပညာအလုပ်အင်္ဂလိပ်, Sanskrit နှင့်ကွန်ပျူတာဘာသာစကားများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသောသဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်းအတွက် multidisciplinary သုတေသနအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူမလည်းနှစ်ခုလှပသောကလေးများမွေးဖွားပေးတော်မူပြီ! 2015 မှာတော့သူမနှင့်သူမ၏ကလေးများသူမသည်လက်ရှိတွင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခသည်အဘယ်မှာရှိဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်, အမေရိကန်, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သူမ၏6နှစ်အရွယ်သားနှင့် Maharishi ကျောင်းအပြင်ဘက်3နှစ်အရွယ်သမီးနှင့်အတူ Promila ။
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်စိတ်ဝင်စားကြောင်း
Promila အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက် mum လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်: (1) သူမသည်ကျောင်းသားများကိုတစ်လအဘို့, လေ့လာစီသင်တန်းသို့နက်ရှိုင်းစွာသွား, အချိန်ပြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေး, တက္ကသိုလ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု system ပေါ်တွင်သွန်သင်သောစိတ်ကူးကြိုက်တယ်။ (2) သောကြောင့် Sanskrit အတွက် mum ဒြေအကျိုးစီးပွား, ဒီသုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများကိုပေးအပ်သည်။ အဆိုပါ mum ကျောင်းဝင်းကပ်လျက် (3) ကဖြစ်ပါတယ် ဉာဏ်အလင်း၏အသက်အရွယ်၏ Maharishi ကျောင်း (MSAE)သူမ၏သားသမီးများအမေရိကန်ပညာရေး၏အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရှိရာတစ်ဆုရကျောင်းတွင်။
ဤအရာအလုံးစုံအရေးကြီးသောတာဝန်များကိုအပြင်, Promila အိန္ဒိယတွင်သူမ၏ပညာရေးစင်တာမန်နေဂျာနှင့်အတူနေ့စဉ်အဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သူမသည်-တာဝန် Multi မှသူမ၏စွမ်းရည်ကိုဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်, နှင့်သူမ၏နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကြောင့်ခံစားရ Transcendental Meditation® technique ကို သူမ၏တစ်ဦးမျှတသော, ပို. ပို. အောင်မြင်သောအသက်တာကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။
သူမ၏အင်စတီကျုနှင့်၎င်း၏တိုးတက်မှုနှုန်းသူမ၏အသက်တာ၏အကြီးစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်သောကြောင့်, Promila ပျော်ရွှင်စွာ, ငွေရေးကြေးရေးကထောကျပံ့ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ သူမ၏လစာ၏ 30-40% ပေးခြင်း mum မှာအင်စတီကျုနှင့် Lucknow မြို့အနီးခုနစ်ယောက်က၎င်း၏လက်ရှိဝန်ထမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့။
Promila ဒီဇွန်လအတိတ်သူမ၏ကလေးများနှင့်အတူအိန္ဒိယသွားရောက်ပြန်လာသောမီ, သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံကျောင်းတွင် (MSAE) ရောင်းရန်ရှိသည်ကွန်ပျူတာများ6ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းကြား၏။ ဒါကြောင့်သူမ (နောက်တဖန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူ) သူတို့ကိုဝယ်, နှင့်ကျေးရွာနှင့်ပညာရေးစင်တာများအတွက်အိန္ဒိယကသူတို့ကိုပြန်သိမ်းသွား၏။
Promila ကဒီမှာဖဲရ်ဖီးလ်အတွက် MSAE ကနေကွန်ပျူတာများကိုဝယ်ယူနှင့်လက်တော်သည်ဤနွေရာသီသူမ၏ CSC ပြန်အိန္ဒိယကသူတို့ကိုသယ်ဆောင်။
Promila ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခြောက်လအိန္ဒိယကျေးရွာပေါင်းတစ်စပျစ်သီးပြွတ်တို့တွင်တယောက်ကိုကွန်ပျူတာပညာရေးဗဟိုချက်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အချက်အချာလည်းမိမိတို့၏ယေဘုယျနေ့က-to-နေ့ဖြည့်တင်းပါလိမ့်မယ်ဆိတျကှကွန်ပျူတာပညာရေးပေးခြင်းကနေလိုအပ်ပါတယ်: စသည်တို့ကိုသူတို့ကိုဆေးဝါးများထောက်ပံ့, ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်ရုံ, ATM စက်များ, ယေဘုယျအာမခံကဲ့သို့ဤသည်အချက်အချာလည်းအသစ်သောနည်းပညာတွေနှင့်အော်ဂဲနစ်၏နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. လယ်သမားကိုပိုမိုသိရှိစေခြင်းငှါ လယ်ယာစိုက်ပျိုး။ လယ်သမားများဘယ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းကြားနိုင်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စျေးနှုန်းမှာသူတို့အသီးအနှံရောင်းချသင့်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ရိုးရိုး, ခေတ်သစ်နေအိမ်များတွင်နေထိုင်, တစ်လျောက်ပတ်သောလစာစေ, ကောင်းသောကျောင်းများနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အခြားခေတ်မီအဆောက်အဦးများရှိသင့်ပါတယ်သင့်ပါတယ်။
Promila "တနေ့ကျနော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတချို့ mum မှာလေ့လာဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့လျှင်ဤငါ့အဘို့စစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်လိုပဲတကယ်တော့, ပါလိမ့်မယ်!", ဖြည့်စွက်
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိလူများတို့သည်ပြီးခဲ့သည့် 12 နှစ်အတွင်းရွေ့လျားငါ့ကိုစောင့်လေ၏။ ငါအမြဲတမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ဘဝအသက်တာ၌နှုတ်ဆောင်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်ချမ်းသာကိုမြင်ဝမ်းသာတယ်။ ငါ့မိသားစုရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်နားလည်မှုမရှိရင်ကျနော်တို့အောင်မြင်သောပါပြီနိုင်ဘူး။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုအများအပြားနာရီလုပ်ကိုင်ဖို့ငါ့ကို enable, ငါတို့ CSC မှာပိုပြီးအာရုံစိုက်အချိန်မွှုပျနှံဖို့လိုအပျထောကျပံ့မဆိုကြင်နာပေးခွငျးအားဖွငျ့ငါ့ဘက်၌ရပ်နေ၏သိရပါတယ်။ "
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2016_09-01.jpg 285 463 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-09-23 18:01:082019-05-31 10:57:34ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်ကျေးလက်ဒေသအိန္ဒိယတွင်လူငယ်အမျိုးသမီးဘဝပုံစံပြောင်းခြင်း
သြဂုတ်လ 23, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ဒါဟာနွေဦးပေါက် mum များအတွက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေး Center က Verrill ခန်းမထဲမှာကျောင်းဝင်းအပေါ်ဆင်းလှသောအစ်မ, အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရုံးများ (အခန်း 43, 45 နှင့် 46) မှပြောင်းရွှေ့။
အသစ်စက်ရုံကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်ဘူတာနှစ်ခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအခန်းပေါင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, စစ်ဆင်ရေးများနှင့်နည်းပြ / လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုသင်း၏ထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အပွင့်လင်းကြမ်းပြင်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ComPro အလုပ်ရှာဖွေရေးရေးစင်တာများ၏ 11 န်ထမ်းအဖွဲ့ဝင် ဆွေးနွေးပွဲများ, အလုပ်ရုံ, အင်တာဗျူးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်နည်းပြ, ချက်ချင်း-ထုတ်ပေးအလုပ်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖှံ့ဖွိုးတိုး: အကြိုးသင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) မှတဆင့်အမေရိကန်အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများတွင်ထောက်ခံမှုကျောင်းသားအောင်မြင်မှု။
ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေး Center ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ထမ်းများ
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အမေရိကန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်အနေအထားတည်နေရာများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်သုံးရက်သတ္တပတ်အလုပ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲယူ 1996 ကတည်းက 1700 လူအမျိုးမျိုးထံမှနီးပါး 80 ကျောင်းသားများကို 1000 အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများထက် သာ. သင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုပြုလေပြီ။ နိုင်ငံတကာအတွက်လက်ရှိနေရာချထားနှုန်းထားများ 99% ဖြစ်ပါတယ်။
"ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ထိုမတိုင်ခင်ငါအလုပ်သင်ရှာဖွေနေစတင်ရန်ဘယ်လိုမဆိုစိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုအထင်ကြီးဖို့အင်တာဗျူးဖို့ငါ၏အမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဘယ်လောက်။
"အခုကျနော်အမေရိကန်အတွက်အကြီးမားဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးများ၏ပထမဦးဆုံးပတ်ပတ်လည်လွန်ပြီ, ငါအတန်းထဲတွင်သင်ယူထားသောကျွမ်းကျင်မှုကိုငါ့မျက်နှာသာအတွက်အရေးပါသောခြားနားချက်စေမည်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ ဒီအံ့သြစရာသင်တန်းကာလအတွင်းအားလုံးသင့်ရဲ့အကူအညီနှငျ့ထောကျပံ့ဘို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "-အလီ Shedaei (အီရန်ထံမှ)
"ငါသည်သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါအခြားသူများကရှင်းပြသလဲ? အဘယ်သို့ငါ CPT အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလျက် start သလဲ? စတာတွေဟာ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, အင်တာဗျူးတွေနဲ့အတူ interaction က? အားလုံးအဖြေကတော့အလုပ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာလူတန်းစားများ၏နှစ်ပတ်အတွင်းမှာရောက်လာတယ်။ ကျနော်တို့အတန်းကာလအတွင်းလေ့ကျင့်သောလှောင်ပြောင်အင်တာဗျူးတွေကတဆင့်ယုံကြည်မှုအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကုမ္ပဏီထံမှဖုန်းခေါ်တယ်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်း, ဒါလွယ်ကူသောခဲ့ "! -Surendra Bajracharya (နီပေါမှ)
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2016_08-01.jpg 285 463 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-08-23 18:16:132019-05-31 10:57:27နယူးကွန်ပျူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေးရေးစင်တာ
ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအောင်မြင်မှု၏အစီအစဉ်ပွဲ 20 နှစ်များ
ဇူလိုင်လ 23, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ကျောင်းဆင်းပွဲလှုပ်ရှားမှုများပြီးခဲ့သည့်လက, အ mum ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်စဉ်အတွင်းSM ယင်း၏ကျင်းပ 20th နှစ်ပတ်လည်။ လက်ရှိတွင်အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းကျောင်းသားအရေအတွက်မှာစံချိန်တင်အရေအတွက်က-ကျော် 1000, ကျောင်းဝင်းပေါ်နှင့် practicum ရာထူးအတွက်ကျောင်းသားများကိုအပါအဝင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုယခုအထိ 80 နိုင်ငံတွေထဲကနေလာကြသူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ, အကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်ကို၎င်း, အစီအစဉ်ကိုကြီးထွားလာဆက်လက်ခန့်မှန်းထားသည်။
Craig Pearson, mum အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး "win-win-win အခွအေနေ" အဖြစ် program ကိုဖော်ပြထား
သူတို့တစ်ဦးအမေရိကန်ဒီဂရီဝင်ငွေနှင့်တစ်ဦးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဖို့, သူတို့၏ practicum အနေအထားမှတဆင့်မိမိတို့၏ပညာရေးဆိုင်ရာ program ကို Self-ငွေကြေးနိုငျသောကွောငျ့ကျောင်းသားများအနိုင်ရ။
သူတို့အလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှအကျိုးကြောင့်ပါဝင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ practicum ကုမ္ပဏီများမှအနိုင်ရ။
"ကျောင်းသားတွေကိုအရည်အချင်းနှင့်လေးနက်သောစိတ်ကြောင့်အဆိုပါတက္ကသိုလ်အနိုင်ရရှိနှင့်သူတို့သည်ငါတို့အံ့သြစရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြု" ဟုဒေါက်တာ Pearson ကပြောပါတယ်။
အဘယ်အရာကို program ကိုဒါအောင်မြင်သောစေသည်?
ကျောင်းသားများကိုကျောင်းဝင်းသာရှစ်လလေ့လာဖို့နှင့်အကွာအဝေးပညာရေးမှတဆင့်၎င်းတို့၏ဒီဂရီပြီးသွားနေချိန်မှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှာ paid ရာထူး၌ရှိသကဲ့သို့ practicum ကျောင်းသားများကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်နှစ်နှစ်အထိသုံးစွဲနေသောကြောင့် mum ကမ်းလှမ်းသောက MS ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်ဒီဂရီထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လစာကနေသူတို့ရဲ့ပညာရေးအဘို့အပေးဆောင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤဖွဲ့စည်းပုံ, US မှာလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလေ့လာပြီးရရှိလိုသူများအတွက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Greg Guthrie, Ph.D။ ဦးခေါင်းနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းပြီးရင်ဒင်းအဖြစ် 20 နှစ်ကြာပြီးနောက်ဒေါက်တာ Guthrie ယခုပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာဒင်းအဖြစ်အသစ်တခုအနေအထားယူပြီးပါလိမ့်မည်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ဒင်းအဖြစ်သူ့ကိုအစားထိုးဒေါက်တာလေဝိ, ထို program ၏လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤ "ComPro" ဖွဲ့စည်းပုံမှာ 1996 စတင်ခဲ့ပြီးပရိုဂရမ်ခေါင်းဆောင်များ Greg Guthrie နဲ့ Keith လဝေိအခါ, Elaine Guthrie, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဦးစီးဌာန၏လက်ရှိညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူယင်းအစီအစဉ်မှကျောင်းသားများကိုငှားရမ်းရန်ဖဲရ်ဖီးလ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချဉ်းကပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ကပထမနှစ်တွင် 14 ကျောင်းသားများကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုကြီးထွားဖို့စတင်များနှင့်မကြာမီဖဲရ်ဖီးလ်ကအလုပ်ဈေးကွက်ပြည့်ဖြစ်လာသည်။ 1999 မှာတော့ရွန်ဘားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာအဖြစ်အသင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖဲရ်ဖီးလ်ကပြင်ပကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများချဉ်းကပ်လာခဲ့သည်။ မိမိအမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအောငျမွငျခဲ့များနှင့် 2000 ကျောင်းအပ်အတွက် 112 မှခုန်ချ။
ဂျင်မ် Garrett, ဦးခေါင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပြ, ကျောင်းသားတစ်ဦးကူညီပေးသည်
အသစ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Craig ကို Shaw 2008 အတွက်လူမှုမီဒီယာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်သောအခါအကျောင်းအပ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုအစဉ်အဆက်ကတည်းကတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ ကျောင်းသားရာပေါင်းများစွာများအတွက် practicum အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းမျှသေးငယ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကွန်ပြူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေး Center ကအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်အတွက်ကျောင်းသားများကိုပညာပေးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်စတင်-အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုပေါ်သူတို့ကိုနည်းပြများကစောင့်ရှောက်ကြာယျ။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်မှာတော့ကျောင်းသား 99 ရာခိုင်နှုန်းကို practicum ရာထူးတွေ့ပြီ။
ကျောင်းသားများအတန်းအစားထဲတွင် Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုလေ့ကျင့်
ကျောင်းသားများအစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားသည့်အခါမိမိတို့၏သတိဖွံ့ဖြိုးဆဲသူတို့၏စာရင်းတွင်မြင့်မားသည်မဟုတ်။ သူတို့ကဒီမှာနေတစ်ချိန်က "ဒါပေမဲ့သူတို့ကနားလည်ရန်လာနှင့်တန်ဖိုးထား Transcendental Meditation® technique ကို"Greg Guthrie, ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာဒင်းကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကသူတို့ practicum အဆင့်ရောက်နေနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများ, သူတို့ရဲ့အလုပ်ဘယ်လောက်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အလုပ်များအကြောင်းကိုအများအပြားဆွေးနွေးချက်ပေးပို့သည့်အခါနှင့်ဘယ်လို Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုကူညီပေးသည်။ "
Keith လေဝိအမျိုး, Ph.D, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ဒင်း
Elaine Guthrie, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနဒါရိုက်တာ
တစ်ဦးကိုကြည့်ပါ ဗီဒီယို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွဲ့ရလေးခုထူးချွန်ကျောင်းသားဆုလက်ခံရရှိရှိရာ 2016 ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား၏။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2016_07-01.jpg 285 463 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-07-23 18:32:152019-05-31 10:56:50ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအောင်မြင်မှု၏အစီအစဉ်ပွဲ 20 နှစ်များ
ဧပြီလ 23, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
ဇန်နဝါရီလ 23, 2016 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2015 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by cre8or
သြဂုတ်လ 24, 2014 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
ဗင်နီဇွဲလားကျောင်းသား '' အခမဲ့အသိပညာ 'မြှင့်တင်ရေးကမ္ဘာ့ဖလားသွားလာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2014 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
Damian Finol အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလာရန်မလူစိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးကလေးတုန်းကသူတို့ဘွဲ့ရလေ့လာမှုများကိုလိုက်နိုင်အောင်, မိမိမိဘ, အမေရိကန် Maracaibo, ဗင်နီဇွဲလားကနေထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ထက်ပိုမို 25 နှစ်ကြာပြီးနောက် Damian စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘွဲ့ရပညာရေးများအတွက်အမေရိကန်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။
နယ်လှည့်၏ Damian ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဦးဆောင်ထားပါတယ် Wikimedia Foundationသူက "ကိုရောက်စေဖို့တိုင်းတိုက်ကြီးအပေါ် Wikimedia အခန်းကြီးတည်ထောင်ရန်ကူညီပေးသည်ဘယ်မှာအခမဲ့အသိပညာသူကအရမ်းဂုဏ်ယူဖြစ်သော၏ "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း-အဓိကအောင်မြင်ခြင်း။ သူသည်ဤဂုဏ်ထူးတွေနဲ့သာ 8-10 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Wikimedia အခန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်ရှိကုလသမဂ္ဂမှာ Damian Finol ။
ဥပမာအားဖြင့်, 2006 အတွက် Damian ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ Wikimania မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ် ဝီကီပီးဒီးယား အနောက်မြောက်ပိုင်းဗင်နီဇွဲလားအတွက် Native အမေရိကန်တောင်ပိုင်းအမြိုးအနှယျ၌တည်၏။ ထို့နောက် 2008 အတွက်လက်ဇန္ဒြီးယား, အီဂျစ်အတွက်သမိုင်းဝင်စာကြည့်တိုက်အတွက် Damian "စပိန်ဝီကီပီးဒီးယားဆီသို့လက်တင်အမေရိကန်တွေ၏လူမှုသဘောထားတွေ။ " ပေါ်တွင်ပို့ချဒီ 25 မိနစ်ဟောပြောပွဲစာကြည့်တိုက်၏ရုပ်ရှင် archive ကိုမှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကအခမဲ့အသိပညာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့အခန်းကြီးတည်ထောင်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများထံသို့ပေးပို့နေဆဲဖြစ်သည်။ လာမည့်လတွင်သူသည် mum မှာနွေဦးချိုးကာလအတွင်းဂျာမနီမှတတ်၏။
Maracaibo အတွက်တက္ကသိုလ်ရာဖေးလ် Belloso Chacin မှာပညာပေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့လေ့လာနေနေစဉ်, Damian အများစု JSP / servlets လုပ်ခဲ့တယ်, ပြီးတော့ Unix / Linux ကိုစနစ်ကစီမံခန့်ခွဲဖို့ switched ။ ဤသူဗင်နီဇွဲလားအတွက်အကြီးမားဆုံးဘဏ်များ၏နှစ်ခုအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိအိုင်တီလုံခြုံရေး, မှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ သူကခရက်ဒစ် / ငွေကြိုကတ်များနှင့် PCI-DSS လေးစားလိုက်နာခြင်း (VISA / MasterCard ကိုလိုအပ်သည်အမျှ) ရက်နေ့တွင် EMV chip ကိုနည်းပညာအပါအဝင်စီမံကိန်းဟာကြီးမားတဲ့အကွာအဝေး၏လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
2008-2011 မှစ. Damian တစ်ဦးအဖြစ်, Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု, စနစ်များ, အိုင်တီလုံခြုံရေးနှင့် Linux SQL / Databases များကိုဆုံးမဩဝါဒပေး ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဗင်နီဇွဲလား Nueva Esparta တက္ကသိုလ်တွင်။
ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ 5-6 နှစ်ကြာပြီးနောက် Damian တစ်ဦးမာစတာဒီဂရီနဲ့သူ့ရဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကိုဆက်လက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အများအပြားကမိတ်ဆွေများကို mum မှာမိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကို raved နှင့်အချို့သောသုတေသနပြုပြီးနောက်သူသင်တန်းများများ၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (7-8 လအတွင်းဆုံးဖြတ်, တစ်လအချိန်ပြည့်နှုန်းတဦးတည်းသင်တန်းလေ့လာနေတဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ပေးဆောင်ခွင့်အာဏာလက်တွေ့ကျတဲ့သင်တန်းတက်မှနှစ်နှစ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ) အများဆုံးဖိတျခဲ့သညျ။ ထို့အပြင်သူသည်ထို program ၏အလေ့အကျင့်ကတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းလှုံ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်တယ် Transcendental Meditation®အစီအစဉ်ကို.
Damian အဆိုအရ "mum မှာ MSCS သင်တန်းများမယုံနိုင်လောက်အောင်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ကြသည်။ အလေ့အကျင့် programming software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတန်း, စတာတွေ, နောက်ဆုံးပေါ်လက်တွေ့ကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် algorithms သင်ပေး, ဒါကြောင့်သင်လက်ရှိအလုပ်လယ်ကွင်းများအတွက်အဆင်သင့်ပါပဲ။ "
Damian တာပူနွေးဗင်နီဇွဲလားရာသီဥတုမှနေသားတကျသော်လည်း, အအေးဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါရာသီဥတုက၏လအနည်းငယ်သူ့ကိုအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး။ "ကျောင်းသားများ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူတို့တွင်လူ့နွေးထွေးမှု, mum မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာကအရမ်းနှစျသိမျ့ဖြစ်၏။ "
"ကျောင်းဝင်းပေါ်နှင့်ရပ်ရွာထဲတွင်လူတွေကကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်အလွန်ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကြိုဆိုကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအနီးအနားမှာရှိလက်တင်ကလပ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများအများကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။ ကျောင်းဝင်းသာစုံတွဲတစ်တွဲရက်အကြာမှာ, သင်တက္ကသိုလ်ကသင်၏ဒုတိယနေအိမ်တောင်းဆိုစတင်နိုင်ပါသည်"Damian ကထပ်ပြောသည်။
"ငါသည်ကြားလျှင်အကြှနျုပျ၏အဓိကအထငျမှားနှင့် mum အကြောင်းကိုဖတ်ပါကနောက်ကွယ်မှ Transcendental တှေးတောဆငျခွလပ်ြရြားမြကြီးနှင့်မည်သို့ကဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့တူတံပိုးမှုတ်သောအခါ။ သင်တန်း၏ဤအမှုမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုမဆိုလမ်းထဲမှာဘာသာတရားကိုမှဆက်စပ်မရှိ, အသက်ရှည်သမျှဒေသများရှိအကျိုးကျေးဇူးများကိုမှတ်တမ်းတင် 600 သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများထက်ပိုပြီးကထောက်ခံနေသည်။ ဒါဟာယောဂကဲ့သို့စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကူညီပေးသည်ကူညီပေးသည်တဲ့ technique ကိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်အကြောင်းသင်ယူနှင့်ကအားလုံးကိုအကြောင်းကို TM အလိုအလျောက်ဒီဇိုင်း algorithms ပိုမိုလွယ်ကူစေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်၏တိကျစွာနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားတိုးတက်ကြောင်း technique ကိုများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်ငါ့အားပြခဲ့ရာကြုံနေရ။ "
"ဒီ mum အသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်ကနေ, အင်ဒီးယန်း, နီပေါ, ကုရှ, တရုတ်နှင့်သင်တန်း၏လက်တင်အမေရိကန်တွေမှ: ကျောင်းသားများအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာတရားမှလာကြ၏။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ဟာကြီးမားတဲ့ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း (ကက်သလစ်, ပရိုတက်စ) နှင့်အခြားဘာသာတရားများလွန်း (စသည်တို့ကိုမွတ်စလင်, ဟိန္ဒူ,) ရှိပါတယ်။ mum ဘာသာရေးအားလပ်ရက်စောငျ့ရှောကျဖို့ကျောင်းသားများကိုအားပေးနှင့်လွတ်လပ်စွာ၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကျောင်းသားများအတွက်အထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Transcendental တှေးတောဆငျခွလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုများအကြားမျှသဟဇာတမရှိပါတယ်။ "
Damian ကြီးတွေထင်, သူ့ကိုတွေ့ဆုံတဲ့သူတိုင်းမိမိကောင်းသောသဘောသဘာဝ, မျှမျှတတကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းကို, Self-ယုံကြည်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူသဘောကျသည်။ သူဟာလာမယ့် Google ကသို့မဟုတ် Facebook ဖန်တီးကူညီပေးဖို့ကိုချစ်မယ်လို့နှင့်ပြီးသားသူ့ကိုယ်ပိုင်အိုင်တီကုမ္ပဏီစတင်နိုင်ရန်အစီအစဉ်များကိုအောင်နေသည်။ ဇွန်လ၌မိမိအပေါ်-ကျောင်းဝင်းသင်ခန်းစာပြီးပါကပေါ်၌ Damian တစ်ဦး, အဆင်ပြေလုံခြုံပြီးပျော်ရွှင်ဘဝခံစားနေစဉ်အတွင်းဆီယက်တဲလ်အတွက်မိသားစုအနီးတစ်ဦးအလုပ်သင်အနေအထားကိုယူဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
"ကျနော့်အကြံပေးချက်ကိုထိုသို့သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်အတွေ့အကြုံကိုဘဝကြည့်ဖို့မကြောက်ပါနှင့်။ mum မှလာမယ့်ငါအများကြီးဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာချစ်ဖွယ်သတိရလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်တဲ့လွန်စွာအပြုသဘောအတွေ့အကြုံကို-One ခဲ့။ ဒါဟာလေ့လာဖို့နဲ့ကြီးထွားဖို့ပျော်စရာနေရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
"အဆိုပါတက္ကသိုလ်ရုံကဒီမှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံအကြောင်းကိုသင်ပေးဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကြီးထွားကူညီပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားတက္ကသိုလ်များတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်တက္ကသိုလ်၌, အသိပညာကဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲသင်ကြားသည်။ mum မှာစိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကြောင်းအသိပညာအသုံးဝင်သောနှင့်ပိုပြီးအမြင်စေသည်ဘယ်လိုပေါ်မှာအာရုံလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်သင်ယူမှုတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ (နှင့်အပြုသဘောဆောင်) နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "
Damian နှင့် YouTube ပေါ်မှာငါတို့ MSCS အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းဗီဒီယိုအား Watch.
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Venezuelan-Student-Travels-World-Promoting-Free-KnowledgeVenezuelan-Student-Travels-the-World-Promoting-Free-Knowledge.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2014-02-12 18:49:482019-05-31 10:57:21ဗင်နီဇွဲလားကျောင်းသား '' အခမဲ့အသိပညာ 'မြှင့်တင်ရေးကမ္ဘာ့ဖလားသွားလာ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2013 /in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
3 ၏စာမျက်နှာ 41234